Alexandrou George – FJKM Ambavahadimitafo Alexandrou George |
Publié le 15 novembre 2008 à 12:11
Nodimandry tamin’ny 03 Jolay 2007 i Alexandrou George, hoy :
ny vadiny : Rasoamanarivo Marie Juliette
ny zanany : Raveloarison Jean sy Alexandrou Mana
11/03/2022 A la une . Antso sy filazana . Fifohazana
Miarahaba amintsika amin’ny anaran’i Tompo. Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika mpianakavin’ny finoana fa afaka hidera sy hisaotra an’Andriamanitra noho ny faha – 30 taona izay nijoroan’ny Sampana Fifohazana eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo. Izany dia ho tanterahana ny alahady faha – 13 martsa 2022 manomboka amin’ny 9 ora maraina. Koa dia hery lehibe ho an’ny Sampana ny
06/03/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Ny tantaran’i Sodoma sy Gomora
Alahady 06 martsa 2022, andinihan’ny FJKM ny lohahevitra hoe « Mamaly faharatsiana ny Tompo » mandritra ity volana ity, ka nitondran’ny mpitandrina RANDRIANARISOA Alain ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Genesisy 19 : 24-29 : » 24Ary Jehovah nandatsaka tamin’i Sodoma sy Gomora solifara sy afo, avy tamin’i Jehovah tany an-danitra, 25ka nandrava ireny tanàna ireny sy ny tany lemaka
05/03/2022 A la une . Diakona sy Loholona . Fampianarana
Fiofanana Loholona sy Diakona : Vontosy filazantsara Madagasikara, Filazantsara manova ny tantara
Ho antsika Loholona sy Diakona eto @ FJKM Ambavahadimitafo manokana ity fampitàna ny fiofànana iza natao teto am-piangonana ny Sabotsy 05 martsa 2022, izay nanasàna manokana ny mpitandrina Filohan’ny FJKM, Irako Andriamahazosoa Ammy hitondra ny fampianarana hoe « Vontosy filazantsara Madagasikara, Filazantsara manova ny tantara »